Explications en malgache (na Ialamanga) Tamin' ny andron' Andriamanelo sy Ralambo dia tanànan' ny Vazimba Analamanga (ny tampon' Antananarivo ankehitriny). Rakotry ny ala izy tany aloha ela. Ala no teo Miadamafana sy Angavokely izay niova anarana ho Tsiazompaniry taoriana. Alan-kazo vandrika no teo Antsahondry ankehitriny izay Ambadika taloha. Alan' ny hazo famaho no teo Ampamaho ary alan' ny hazotokana, tahaka izay mbola betsaka eny Ambohimanga mandraka ankehitriny, no nandrakotra an' Ankazotokana. Anatirova dia rakotry ny ala vaventy koa tamin' izany, fa Andrianjaka no vao nampikapa ny hazo teo, nanaovany rova sy lapa ho azy. Ny hazo atao hoe voanalakely no be dia be teo Analakely, ka nahatonga ny anarany. Iny avaratra sy avaratra atsinanan' Analakely dia rakotry ny alan' ny vondrona, ka izany no nanaovana azy hoe Ambondrona. Hatreny Betsimitatatra sy ny toerana iva hotsakotsaka rehetra manodidina dia feno kirihitrala sy ampangahazo, ets., ka ireny no voalevina , tototry ny antsanga na may, dia tonga fompotra izay mbola hadina betsaka mandraka ankehitriny ho fandoroan-tanimanga.
Tamin' ny andron-dRadama I vao niova fanononana ho Antananarivo ity renivohitra ity, ary ny Vazaha kosa manao azy hoe Tananarive. [Ravelojaona 1937 page A.506]
Analogues Ny Tendrombohitra Roambinifolo
Explications en malgache faritra anatin' ny faritanin' i Antananarivo [3.1]
Mis à jour le 2021/05/23